Maamulka PUNTLAND oo DIGNIIN culus soo saaray - Caasimada Online
Home Warar Maamulka PUNTLAND oo DIGNIIN culus soo saaray
Maamulka PUNTLAND oo DIGNIIN culus soo saaray
Boosaaso (Caasimada Online) – Maamulka Puntland ayaa soo saaray digniin ku aadan dabaylo xoogan & roobab laga cabsi qabo inay ku dhuftaan xeebaha Bari ee maamulkaasi.
Warqad kasoo baxday maamulka gobolka Bari ayaa waxaa lagu sheegay in saacadaha soo socoda ay dabaylo & roobab ku wajahan yihiin bada sida ay sheegeyso saadaasha cimilada.
Maamulka ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanada ku dhow xeebaha in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah, isla-markaana ay ka fogaadaan Togaga & dhulka banaan.
“Hadaba waxaa la farayaa shacabka degan dhulka Banaan, Togaga iyo meelaha u dhow xeebta inay ka fogaadaan goobahaas si looga taxadaro in dhibaato ka soo gaarto dadka iyo duunyada,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay maamulka gobolka Bari ee Puntland.
Sidoo kale maamulka ayaa ku amray saraakiisha ammaanka iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka in 48 saac ee soo socda aysan wax gadiid ah u bixi karin dhanka badda.